Far out - Part 6
Match Latest News Players to watch Top Stories
विश्वकपमा सहभागि ३२ टिमको जर्सी, कुन टिम विश्वकपमा चम्किन्छ ?
नेप्लेज, २३ जेठ । रुसमा हुने विश्वकपका लागि सहभागि सबै टिमले आफ्नो जर्सि सार्वजनिक गरेका छन । जसमा सबै टिमले नयाँ किट्स निकालेका छन । यस्ता छन ३२ देशका जर्सि, तपाईलाई कुन मन पर्यो ? समुह अनुसार टिमको जर्सी Group A Egypt Russia…
रोचक कथाः रसिया विश्वकप अंकमा
नेप्लेज, २१ जेठ । विश्वकप सुरु हुन १० दिन बाँकी छ । विश्वकको उपाधि कुन देशले जित्ला ? स्टार खेलाडीको प्रदर्शन कस्तो रहला ? यस्ता अनुमानहरु भन्दा पनि यहाँ विश्वकपको १० रोचक पक्ष अंकमा प्रस्तुत छ । १ ट्रफीका लागि विश्वभरका फुटबल खेल्ने…
अहिलेकाे जस्ताे प्रविधी भएकाे भए जेल जान्थें- म्याराडाेना
नेप्लेज,१८ जेठ । सन् १९८६ को विश्वकप अर्जेन्टिनालाई दिलाउन नायक बनेका डिएगो म्याराडोनाले सो बेला अहिलेको प्रयोगमा रहेका भिडियाे सहायक रेफ्रि (भार) भएको भए आफु जेल जानुपर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन । सो बेलाको विश्वकपको फाइनलमा हातले गोल…
विश्वकप ट्रफी हराएको त्यो घटना, जसमा बन्यो कुकुर नायक
नेप्लेज, ११ जेठ । विश्व फुटबलको महाकुम्भ मेला विश्वकप फुटबल आउन अब ३ साता भन्दा कम समय बाँकी छ । यस्तोमा विश्वकपका बारेमा धेरै रोचक पक्षहरुको चर्चा भइरहेको छ । यस्तैमा विश्वकपको इतिहासमा निकै अनौठो र आश्चार्य लाग्दो घटना हो ट्रफिको चोरी ।…